Xogta laga helay tartanka kuraasta Aqalka Sare ee Kismayo (Senatorkii ugu horeeyay oo la doortay..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xogta laga helay tartanka kuraasta Aqalka Sare ee Kismayo (Senatorkii ugu horeeyay oo la doortay..)
Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in tartan aan xoog badan lahayn, laakiin adag uu dhex maray mushariixinta laba kursi oo ka mida afarta kursi ee maanta la dooranayo.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in musharixiinta qaar ay bixiyeen lacago u dhaxeeya 300 ilaa 1500 Dollar, waxaana ugu adag labada Kursi ee tartanka furan, iyadoo labada kursi ee ay ku tartamayaan C/llaahi Fartaag iyo Iftiin Baasto ay yihiin kuwa ay u muuqato inay si sahlan dib ugu soo laabanayaan.
Dhinaca kale musharax ka mida xubnaha kuraasta maanta ku tartamaya ayaa la sheegay inay culeys gaara la saaray si looga hor istaago inuu olole sameeyo, lana kulmo xildhibaannada Baarlamaanka Jubbaland.
Kursiga ugu adag ee lagu tartamay ayaa ahaa kursiga ay isu sharxeen xubnaha kala ah: Ilyaas Badal Gaboose, Maxamed Axmed Sayid iyo Sharmarke Maxamed Cabdi, waxaana kursigan lagu loolamay ku guuleystay Ilyaas Bedel.
Ilyaas Gaboose ayaa helay 55 cod, halka Musharaxa la tartamayay Maxamed Axmed Sayid uu isna helay 17 cod, wuxuuna sidaas ku noqday senatoorkii ugu horeeyay ee loo doortay xilka aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Waxaa socda doorashada kuraasta kale ee Baarlamaanka, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda la doorto saddexda kursi ee maanta lagu dooranayo magaalada Kismaayo.
Previous articleAmniga magaalada Kismaayo oo la adkeeyay iyo Doorashadii Aqalka Sare oo dhowaan ka bilaabaneysa
Next articleC/llaahi Fartaag oo tartan la’aan mar kale dib loogu doortay Senator ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamanka